Jesosy no Mpiandry Tsara – filazantsaramada
Jesosy no Mpiandry Tsara
Publié parfilazantsaramada	 avril 12, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Jesosy no Mpiandry Tsara
« Izaho no Mpiandry tsara; ny Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry » Jaona10:11
Jesosy Kristy no miteny eto, ary manambara ny tenany Izy. Izaho no
Mpiandry tsara. Inona moa no andrasana? Ny andrasan’ny mpiandry eto dia ny ondry. Jesosy dia manambara fa Izy no Mpiandry tsara. Ny ondry mantsy dia karazana biby mora azon’ny fahavalony, ary fahavalony dia matetika ny amboadia. Tsy manana fiarovana ny ondry afa-tsy ny andriny izay manoto. Eo
anatrehan’izany dia mora azon’ny amboadia tokoa izy. Mila mpiandry ny ondry.
Iza ary no ondriny? Voalaza fa ny ondriny mihaino ny feony. Ary ny ondriny mahafantatra Azy. Fantatr’i Jesosy koa ny ondriny. Raha ondriny isika dia mahafantatra Azy, sy mihaino ny feony.
Inona ary no maha mpiandry tsara an’i Jesosy? Mahafantatra ny ondriny Izy. Fantany ianao, indrindra raha mihaino ny feony. Misy mantsy ondry hafa izay tsy ao amin’ny vala, ary ireny dia mbola ho entiny hihaino ny feony ary hataon’ny Tompo ho andiany iray ny ondriny rehetra. Raha maratra ny ondry, na misy manjo ny ondry, dia Izy no mikarakara azy. Misy koa ireo izay mania, dia ny Mpiandry tsara no mitady azy ka na eo ampelatanany aza ny sivy amby sivi-folo dia lasa Izy mitady izay very.
Saika nositranin’i Jesosy avokoa ny marary rehetra nentina teo Aminy. Te hanasitrana anao koa Izy. Ny tena zavatra lehibe indrindra amin’i Jesosy alohan’izany dia ny hahazoantsika famonjena. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. « Ny Mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ». Jesosy tokoa no Ilay Mpiandry tsara fa nahafoy ny ainy ka nanaiky ho faty teo amin’ny hazo fijaliana Izy. Azony natao ny niantso anjely marobe mba hiaro Azy tsy ho voasambotra, fa tena Izy mihitsy no nanolotra ny ainy teo amin’ny hazo fijaliana mba hahazoantsika famelankeloka. Nalatsaka ny rany, ary izany rany latsaka izany no nanadiovana izay manaiky ho dioviny, rà nalatsaka indray mandeha nefa ampy hanadio ny fahotan’ny rehetra. Tsy mila fanatitra hovonoina toy ny omby, gisa …intsony fa ny Ran’i Kristy ihany dia ampy. Tsy ny asa soa vitantsika no hanamarinana antsika fa ny fanekentsika ny ho dioviny amin’ny rany. Tsy nahatazona an’i Jesosy anefa ny fahafatesana fa nitsangana tamin’ny maty Izy, ary dia velona. Ny fahavelomany koa dia mitondra antsika amin’ny fahavelomana koa. Maty noho ny amin’ny ota, nefa velona ho amin ny fiainana mandrakizay ao amin’i Krisy. Miara mandresy aminy ny ondriny: izany no maha Mpiandry tsara Azy.
Ho aminao anie ny Tompo.
Publié parfilazantsaramada avril 12, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized
Sambatra izay tsy nahita nefa nino
NY FINOANA SY NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA